खाडीमा पसिना बगाउने श्रीमति अर्कैको अँगालोमा मस्ती गर्ने ! – Ramailo Sandesh
खाडीमा पसिना बगाउने श्रीमति अर्कैको अँगालोमा मस्ती गर्ने !
अब म पराइसँग रात बिताएकी श्रीमतीलाई कसरी विश्वास गरुँ ? म भित्रभित्रै खोक्रो हुँदैछु। न फर्किएर विदेश जान मन छ, न बाँच्नै। चाहिएको सबै पु-याइदिएकै थिएँ तर आज आफ्नै प्रेमले यस्तो गर्ली भनेर सोचेको पनि थिइनँ। म आफू पनि ऊ हुँदाहुँदै कहिल्यै पराई स्त्रीसँग लसपस गरिनँ। म खाडीमा हुँदा १२ घण्टासम्म काम गरेर आए पनि उसलाई समय दिन्थेँ तर आज यस्तो खबरले मलाई मरेतुल्य बनाएको छ। अब सम्बन्ध विच्छेद गरौँ भने बाबा सुगर र प्रेसरको बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि केही भइदेला भन्ने डर।म कसको मुख हेरेर बाँच्नु ? हजुरहरुसँग केही सल्लाह छ भने दिनु होला। म के गरौँ ?
यी दुई राशी भएकाहरु एकसाथ कहिले पनि खुसि हुन सक्दैनन्
हामी सबैको एक निश्चित राशी हुन्छ। तिनै राशिका आधारमा हामीले आफ्नो भविश्य र व्यक्तित्वको बारेमा जान्ने अवसर पाउछौ। त्यस्तै तपाईले दैनिक रुपमा दैनिक राशिफल पनि त हेर्ने या सुन्ने गर्नु भएकै होला। यसका बाबजुत राशी हाम्रो विवाहसंग पनि सम्बन्धित रहेको हुन्छ।
परापुर्वकालदेखि आजसम्म पनि बिवाह हुनुभन्दा पहिले केटा र केटीको जन्म कुण्डली मिलाउने गरिन्छ। र बिवाह पक्का गरिन्छ। तर जन्म कुण्डली भन्दा पहिले राशिले तपाईका लागि कुन पार्टनर सहि छ /गलत छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छ। आज हामी विवाहका मामलामा कुन राशी भएकाका लागि कुन राशिका व्यक्ति सहि हुन्छ या गलत यसको बारेमा बताउन जादै छौं आउनुहोस
मेष राशी : मेष राशी भएकाहरु आँटिला , आत्मनिर्भर , संबेदनशील स्वभावका हुन्छन। पार्टनरको सवालमा भन्ने हो भने मेष राशी भएकाहरुका लागि वृष राशी गलत हुन् सक्छन। किनकि वृष राशिका मानिसहरु बढी प्राक्टिकल हुन्छन , जब कि तपाई सम्बन्ध केहि रोमान्चक होस् भन्ने चाहनु हुन्छ।
वृष राशी : वृष राशीका मानिसहरु इमान्दार , दृढ निश्चयी , र विश्वासिला हुने गर्छन। यिनीहरुका लागि पनि धनु राशिको चयन गलत हुने गर्छ। किनकी धनु राशिका मानिस अलि बढी चलाख हुन्छन, जबकी वृष राशी शान्ति चाहन्छ।
मिथुन राशी : मिथुन राशी भएकाहरुले सम्बन्धलाई इमान्दारिताका साथ निभाउने गर्छन। यिनीहरुको स्वभाव लबिङ्ग र केयारिंग टाईपकोहुन्छ। यिनीहरुका लागि मकर राशी भएकाहरु गलत हुन्छन। किनकि यिनीहरुले बढी संबेदनशील हुने गर्छन साथै अनियन्त्रित पनि।
कर्कट राशी : कर्कट राशी भएकाहरु इमोशनल,केयरिंग र हेल्पफुल प्रकृतिका हुन्छन। यस राशी भएकाहरु कुम्भ राशी भएका व्यक्तिसंग सम्बन्ध गास्नबाट बच्नुपर्ने छ। किनकि यिनीहरु अरुको भन्दा आफ्नो बढी मतलब राख्छन र खरो व्यवहार दर्शाउने खालका हुन्छन।
सिंह राशी : सिंह राशिको मतलब व्यक्तिलाई आकर्षित गर्नु , फ्लर्ट गर्नु र आत्मविश्वासी हुनु भन्ने हुन्छ। यस राशी भएकाहरुका लागि वृश्चिक राशि पार्टनरको छनोट गलत हुन्छ। सिंह राशी भएकाहरु आफ्ना पार्टनरबाट रोमान्टिक कुरा सुन्न चाहन्छन तर वृश्चिक राशि भएकाहरु भने यस मामलाका कच्चा नै हुने गर्छन।
कन्या राशी : कन्या राशि भएकाहरु केयारिंग र सहयोगी प्रवृत्तिका हुन्छन। साथमा यिनीहरु जस्तोसुकै सुकै अफ्ठ्यारा परिस्थितिमा पनि डटेर लागि पर्ने गर्छन। पार्टनरको चयनमा भने कन्या राशिलाई धनु राशी निकै नै गलत हो। धनु राशी हुनेहरु निकै नै लापरवाही खालका हुन्छन जुन तपाईलाई पटक्कै मन पर्दैन। साथमा धनु राशी भएकाहरुले आफ्नो सम्बन्धलाई लामो समयसम्म पनि टिकाई राख्न सक्दैन।
तुला राशी : तुल राशी हुनेहरु धेरै नै लापरवाही गर्ने र अजिव प्रकृतिका हुन्छन । साथै यिनीहरुलाई अरुलाई आकर्षित गर्नमा पनि माहिर हुन्छन। तुला राशिका लागि कन्या राशी भएको पार्टनर सहि हुदैन। यस राशी भएकाहरु धेरैजसो समय तनावमा गुज्रिरहेका हुन्छन। साथमा उनिहारी अलि प्राक्टिकल खालका हुन्छन जब कि तुला राशी अलि बढी रमाइलो चाहन्छ।
वृश्चिक राशी : वृश्चिक राशि भएकाहरु सजिलै अरुको बिश्वास जित्न सक्छन। यिनिका लागि मेष राशिको पार्टनरको चयन गर्नु राम्रो हुदैन। यिनीहरु अलि बढी उग्र स्वभावका हुन्छन जब कि वृश्चिक राशी हुनेहरु सम्बन्धलाई मजबुत आकर्षक होस् भन्ने चाहन्छन। ।
धनु राशी : धनु राशी हुनेहरु शक्तिशाली हुन्छन। यिनीहरुका लागि वृष राशीका पार्टनर चयन गर्नु गलत हुन्छन किनकि यिनीहरु बढी ब्यस्त र प्राक्टिकल खालका हुन्छन।
मकर राशी : मकर राशीको अर्को नाम हो ‘इमान्दारिता र बफादारिता’। साथमा यिनीहरु अलि बढी महत्वकांक्षी पनि हुन्छन। उनीहरु चाहन्छन आफ्नो पार्टनरले आफ्ना सबै इच्छा र सपनाहरु पुरा गरिदिउन। मिथुन राशी यस राशिका लागि त्यति उपयुक्त हुदैन किनकि तपाईले यस राशी भएकाहरुलाई त्यति सजिलै बुझ्न र जान्न सक्नुहुन्न र यिनीहरु अलि बढी जिद्धि स्वभावका पनि हुने गर्छन।
कुंभ राशी : कुम्भ राशी भएकाहरु आत्मविश्वासीका साथै आत्मनिर्भर पनि हुन्छन। यिनका लागि कर्कट राशिको चयन गर्नु खासै राम्रो हुदैन। किनकी कर्कट राशीहुनेहरु अलि बढी इमोसनल खालको हुन्छन। साथमा यिनीहरु कन्जुस पनि हुन्छन जसलाई तपाईले राम्रोसंग डिजर्भ गर्न सक्नु हुन्न।
मीन राशी : मिन राशी हुनेहरु बढी रोमान्टिक हुन्छन र दोस्रोको इमोसनको कदर पनि गर्छन। मंका लागि कन्या राशी पार्टनर उपयुक्त हुदैन। किनभने कन्या राशी बादी प्राक्टिकल हुन्छन भने मिन राशी भावुक। साथमा यिनीहरुको परिवर्तित मुडलाई मिन राशिले पनि गर्न सक्दैन।
विभिन्न ब’हाना बनाएर २ मिनेट चाँडै अफिस छाड्ने ३१६ सरकारी कर्मचारीको तलब का’टियो !
राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने निर्णय लिन प्रचण्ड शान्त ठाउँ खोज्दै सिन्धुली